Video:-Daawo xafladii soo dhaweynta madaxda somalida ee London oo dhamaystiran – Idil News
Video:-Daawo xafladii soo dhaweynta madaxda somalida ee London oo dhamaystiran
Posted By: Jibril Qoobey May 11, 2017
Munaasabadan oo aheyd mid si maamuus leh loo soo agaasimay, ayna ka soo qeyb galeen boqolaal dadweyne somaliyed oo ka kala yimdi gobolada dalka UK ,ayaa muujisay dareen isku soo dhawaansho madaxda somalida ah.
Waxaa xusid mudnayd sida ay u hadleen inta badan madaxda madasha ka hadashay.
Madaxweyne Gaas ayaa hadal kooban oo u badnaa kaftan waxuu ku yiri” “Waxaan ku raacsanahay Maryan Mursal oo waxaan leeyahay dhamaanteen waan wada farmaajeysanahay, waxaan leenahay farmaajo noo wada geeya, Laakiin farmaajo noogeeya waxay rabtaa in wax lagu daro, runtii waxa idiin muuqda waxaa waaye socodkayagu , tafararuq mahan, waa midnimo Soomaaliyeed oo uu nagu hogaaminayo Madaxweynahayagu taasi ayaan u nimi london”ayuu yiri .
Sidoo kale Madaxweyne farmaajo ayaa isna madasha khudbad ka jeediyay waxaana ka mid ahaa hadaladisii”Waxaan rabaa inaan halkan idiinka cadeeyo Soomaali waa midowday, Shacabkeenu waa midoobey, qabiil iyo qurunkiisa waa tuurnay, waxaan rabnaa caawa inaan heshiis halkan ku galno. Anaguna waxaan ka shaqeyn doonaa Midnimo , dowlad wanaagsan, horumar iyo umadd Soomaaliyeed oo walaalo ah, midnimo waa wixii aan kusoo gaarnay 60kii ilaa 91dii”ayuu yiri madaxweyne farmaajo..
Madaxweyne Axmed Madoobe oo looga bartay inta badan hadalo aan ka fiirsi lahayn oo ka dhaca ,isla markaana ay dad badan ku tilmamaaan in ay yihiin kuwo kasoo baxay nin siyaasada ka aradan oo dani baday.
Axmed madoobe hadalidiisii xaflada London uu kajeediyay waxaa ka jiray kuwo uu ku durayo nidaamka fadaraalisimka oo isagu uu hada ku fadhiyo kuna qayb qaatay,isla markaana ku matalo shacabka Jubaland,waxaana kamid ahaa hadalisiii……..”Waxaa laga hadlaa madaxweynayaal badan iyo Maamulo anigu waxaan ahay dadka aan rumeysneen Federaalism-ka, wax yar u kaadiya adeer, waxaa la yiri in kasta oo uu hadal fiican ahayn waxaa la yiric Nin dameer dabadiis ka degay dan buu mooday, in State-yo aan sameyno waxaan dan u moodnay inaan marka hore meel walbo lasoo dhiso kadibna hal meel isugu wada nimaadno , mahan inaan dan kale ka leenahay, madaxweynayaasha badan waa ka gudbi doonaa”ayuu yiri Axmed madoobe,hoos ka daawo muuqaalka.